Ukubuka konke kweNkampani / Iphrofayili - IKing Lion Limited
I-Shenzhen King Lion Limited, eyakhiwe ngonyaka ka-2006, Ingabe ingumkhiqizi, etholakala eMaoYuan Industrial Zone, esifundeni saseLonggang, edolobheni laseShenzhen. Sinomnyango wethu wokuklama, ukuthuthukisa nokumaketha, ifektri yethu inendawo yokukhiqiza engaphezu kwamamitha-skwele ayi-1500 futhi abasebenzi abangaphezu kwekhulu bafaka ithimba elilodwa lokuklama kanye nabasebenzi abaqeqeshwe kahle. Okwamanje, kukhona isampula wokwenza workshop, impahla-ukusika workshop, edeskini isethi, yasendlini kanye nehhotela izesekeli zokuhlobisa workshop. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni izinhlobo zebhokisi lesikhumba, ideski, imihlobiso yasekhaya, ibhokisi lezimonyo, neminye imikhiqizo ehlobene, enjengamakhomishi enkomishi, amatafula edeski, amafreyimu wesithombe, abaphathi bamamagazini / obhasikidi, amabhokisi okugcina, amabhokisi wezicubu, amasethi womhleli, izibuko, amathileyi, ama-racks ebhodlela lewayini, isibambi sekhadi legama, ikhava yemenyu njalonjalo! Yonke imiklamo nosayizi kuyatholakala
Siphinde samukele i-ODM ne-OEM. Sigxila ekwakhiweni, ekuthuthukisweni nasekuthengisweni kwemikhiqizo yethu eyinhloko.
Sisebenza kahle futhi sikwazi ukuxazulula izinkinga.
Imikhiqizo yethu ihlangabezana nezindinganiso ze-EU, ithengiswe kahle futhi yazuza izinzuzo kulo lonke elase-USA, i-Europe, Middle East Asia njll. Uma unentshisekelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi futhi uthumele uphenyo lwakho kithi nge-E-mail, Ngokuya ngochwepheshe insiza yokusebenza "yekhwalithi enhle kakhulu, intengo yokuncintisana kakhulu, ukulethwa ngesikhathi esifanele kanye nensizakalo ephelele emva kokudayiswa", Ngenkolelo yokuthi "siyathembana, sabelana ngezintshisekelo futhi sizuza ngokufanayo", sakha ikusasa eliqhakazile kakhulu ngokuhlangana kwethu amaklayenti angaphandle!
silindele ngobuqotho ukuthi wonke amakhasimende eze efektri yethu ezohlolwa, ukuholwa nokubambisana nokwakha ubuhlobo bebhizinisi besikhathi eside nawe. Yonke indalo yethu ingenziwa ngezifiso ngathi ngesitampu esihle nesicwengekile esilahlwe ngentengo ezuzisa ngokwedlulele .Noma ngabe kuyisipho semicimbi ekhethekile noma izinto ukukhangisa ngomkhiqizo wakho, izinto zethu zizokwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho.